Mingalarbar Morning ရဲ့Myanmar Question Page အသစ်မှ အမေးအဖြေကဏ္ဍအစီအစဉ်နှင့် စည်းကမ်းချက်များ – မင်္ဂလာ နံနက်ခင်းMingalarbar Morning
Mingalarbar Morning ရဲ့Myanmar Question Page အသစ်မှ အမေးအဖြေကဏ္ဍအစီအစဉ်နှင့် စည်းကမ်းချက်များ
20/11/2017 04:37 PM|ပညာရေး
မင်္ဂလာပါ ။ Mingalarbar Morning page ကိုအားပေးကြလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ယခုမှာ
ကျွန်တော်တို့ Mingalarbar Morning သတင်းနှင့် မီဒီယာမှ page အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 
Myanmar Question Page https://mingalarbarmorning.com/questions ကို ထားရှိကြောင်း အသိပေးကြားလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း pageရဲ့ 
အဓိကကဏ္ဍမှာ အမေး အဖြေ အစီအစဉ်မျိုးလုပ်တာဖြစ်ပြီး လူတိုင်းဝင်ရောက်မေးမြန်း၊ ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းက လူကြိုက်များပြီး Like အများဆုံးရမယ် (သို့) သင်ဖြေလိုက်တဲ့ အဖြေက လူကြိုက်များပြီး
Like အများဆုံးရမယ်ဆိုရင် လူကြီးမင်းတို့အတွက် ဆုလက်ဆောင်တွေလည်း ချီးမြှင့်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျ ။
Like များမယ်လို့ထင်တဲ့ သင့်မေးခွန်းတွေကို
မေးမြန်းတဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများကို မဖော်ပြဘဲ တင်ပေးမှာဖြစ်၍ အဖြေတွေကိုတော့ တခြားယှဉ်ပြိုင်သူများကဖြေဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Mingalarbar Morning ရဲ့သတင်းတွေကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပြီး Myanmar Question မှ အမေးအဖြေကဏ္ဍတွင် သူငယ်ချင်း
များနဲ့ အတူတကွ ပါဝင်ရင်းဆုလက်ဆောင်တွေ ရယူနိုင်ကြဖို့အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုရှိလာပါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တာဝန်ရှိသူစကားသာ အတည်ပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Mingalarbar Morning ရဲ့ လစဉ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမေးအဖြေကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အသိပညာကို ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဆိုလျှင် ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာများနှင့် ဆုလဒ်များကို ရယူလိုက်ပါ!
ရိုးရှင်းတဲ့ အဆင့်(၂)ဆင့်ဖြင့် ဆုလဒ်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာနော်! အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။
အဆင့် (၁) https://mingalarbarmorning.com/questions ကိုဝင်ရောက်၍ မင်္ဂလာပါနံနက်ခင်း၏ အမေးအဖြေကဏ္ဍ ကိုပါဝင်လိုက်ပါ။
အဆင့် (၂) သင်ဆီမှမေးခွန်းများ နှင့် အဖြေများကို ထုတ်ဖော်ဝေမျှလိုက်ပါ။
Myanmar Question တွင်တစ်ပတ်စီတိုင်းမှာ အနိုင်ရရှိသူ ၂ယောက်အတွက် ဆု၂ခုပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
01 တစ်ပတ်စီတိုင်းတွင် သင်၏မေးခွန်းအတွက်စုစုပေါင်း Like အများဆုံးရရှိသောအနိုင်ရရှိသူကို ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် တစ်သောင်း(၁၀၀၀၀)တန်တစ်ကဒ်
01 တစ်ပတ်စီတိုင်းတွင် မေးခွန်းတွေအတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေအများဆုံးဖြေဆိုနိုင်သောအနိုင်ရရှိသူကို ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် တစ်သောင်း(၁၀၀၀)တန်တစ်ကဒ် အပတ်စဉ်ရလဒ်များကိုနောက်တစ်ပတ် တနင်္လာနေ့တိုင်းတွင် ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အပတ်စဉ် ၄ပတ်၏အဆုံးတွင် Myanmar Question ၏နောက်ဆုံး ဆုလဒ်ကို အကောင်းဆုံးရရှိသူများအား ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
01 ၄ပတ်၏အဆုံးတွင် မေးခွန်းအတွက်စုစုပေါင်း Like အများဆုံးရရှိသော အကောင်းဆုံးမေးခွန်းပိုင်ရှင် အနိုင်ရရှိသူအတွက် SAMSUNG J7 CORE တစ်လုံး
01 ၄ယောက်မြောက်အနိုင်ရရှိသူအတွက် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် တစ်သောင်း(၁၀၀၀၀)တန်တစ်ကဒ်
01 ၄ပတ်၏အဆုံးတွင် အကောင်းဆုံးအဖြေအများဆုံးဖြေဆိုနိုင်သောအကောင်းဆုံးအဖြေပိုင်ရှင် အနိုင်ရရှိသူအတွက် XIAOMI MI5X တစ်လုံး
01 ၄ယောက်မြောက်အနိုင်ရရှိသူအတွက် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် တစ်သောင်း(၁၀၀၀၀)တန်တစ်ကဒ် နောက်တစ်ပတ်၏ အင်္ဂါနေ့တွင် လစဉ်ဆုကို ကြေညာသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်အနိုင်ရရှိသူ - ပထမအပါတ်မှာ ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်ရသူကို ဒုတိယအပါတ်အတွက် ရွေးချယ်မည်မဟုတ်ဘဲ တတိယအပါတ်မှသာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဖုန်းရရှိသူ - ဖုန်းအနိုင်ရရှိသူကို နောက်တစ်နှစ်တိတိ အထိ ဖုန်းထပ်မံပေးမည်မဟုတ်ပါ။
တကယ်လို့ လူနှစ်ယောက်က အကောင်းဆုံးအဖြေအဖြစ် တူညီနေမယ်ဆိုပါလျှင် အကောင်းဆုံးအဖြေများတဲ့နံပါတ်နှုန်းထား (သို့)အကောင်းဆုံးအဖြေနံပါတ်နှုန်းထားများသူသာဆုရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ `
တစ်ပတ်မှာ User တစ်ယောက်အတွက် ဆုတစ်ဆုသာ ပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများအား ပါဝင်ဖို့နှင့် သင့်အားမဲပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါဦးနော် ။
Mingalarbar Morning ၏ feature အသစ် Myanmar Question ကို Like and Follow လုပ်လိုက်ပါ။
mingalarbar morningmyanmar questionnew pagemm questionquestion and answers
Mingalarbar Morning ဝက်ဆိုဒ် ကို အားပေးသူ ပရိတ်သတ်များအတွက် သတင်းကောင်း
နည်းပညာ1/6/2018 01:55 PM
လူမှုဘ၀4/4/2018 01:43 PM
ပညာရေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း (BEd) တက်ရောက်လိုသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပြီ
ပညာရေး18/6/2018 02:04 PM
ပညာရေးတက္ကသိုလ်တက်ရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသော မအိအိမွန်
ပညာရေး18/6/2018 11:00 AM
NEXLABS နည်းပညာကုမ္ပဏီကို MSH မှ ဒေါ်လာ ၁သိန်းခွဲရင်းနှီးမြှပ်နှံ
ပညာရေး23/5/2018 03:15 PM
ပညာရေး18/5/2018 07:32 AM
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဈေးအကြီးဆုံး တက္ကသိုလ်များ
ပညာရေး14/5/2018 02:22 PM
မြန်မာ့ပညာရေး အရည်သွေးမြင့်တင်ရန် EU မှ စတာလင်ပေါင် ၂၂၁ သန်းကူညီမည်
ပညာရေး9/5/2018 05:07 PM
ပညာရေး19/4/2018 04:03 PM
(၁ဝ) တန်းဖြေဆိုပြီး ရွေးချယ်စရာပညာရေး လမ်းကြောင်းများအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မည်
ပညာရေး29/3/2018 01:44 PM
Microsoft ထုတ်ကုန်များ ပြည်တွင်း၌အသုံးပြုမှု သိသိသာသာမြင့်တက်ဟုဆို
ပညာရေး26/3/2018 07:54 PM
Women of Change Award ကို ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး ရရှိ
ပညာရေး23/3/2018 01:09 PM
အိုဆာကာအနီး ပြင်းထန်ငလျင်ကြောင့် နံရံများပြိုကျပြီး လူ ၃ ဦးသေ
နိုင်ငံတကာ18/6/2018 05:37 PM
ဖိုတိုရှော့တွေထိုင်ငိုသွားစေမည့် သဘာဝအလင်းရောင် နဲ့ရိုက်ကူးထားသည့်ပုံများ
လူမှုဘ၀18/6/2018 04:23 PM
အဖေများနေ့မှာ ဘက်ခမ်းကို အကောင်းဆုံးအဖေ လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဗစ်တိုးရီးယား
နိုင်ငံတကာ18/6/2018 04:22 PM
ဆိုးလ်မြို့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသံတမန်များအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရတဲ့ YoonA နှင့် EXO-CBX
အနုပညာကဏ္ဍ18/6/2018 04:04 PM
BTS အဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်သော မှတ်ချက်များကောလ ဟာလ သတင်းများအတွက် တရားစွဲ ဆိုနိုင်ကြောင်း အေဂျင်စီမှ သတင်းထုတ်ပြန်
အနုပညာကဏ္ဍ18/6/2018 03:22 PM
အံ့သြစရာမြင်ကွင်းတွေက နေရာတိုင်းမှာ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြနေတဲ့ ပုံများ
လူမှုဘ၀18/6/2018 03:13 PM
တစ်ပတ်ကျော်ကျော် ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အသက် ၁၀၀ ရှိ လိပ်ကြီးပြန်တွေ့
နိုင်ငံတကာ18/6/2018 03:13 PM
နာမည်ကျော်ကုန်အမှတ်တံဆိတ် Chanel ရဲ့ မော်ဒယ်အဖြစ်အရွေးခံရတဲ့ Kang Daniel
အနုပညာကဏ္ဍ18/6/2018 02:15 PM
မင်းသမီးဂိုဆောင်ယွန်နှင့် မျက်လုံးအရောင်တူတဲ့အတွက် အံ့အားသင့်ခဲ့တဲ့ မင်းသားဆိုဂန်ဂျွန်
အနုပညာကဏ္ဍ18/6/2018 01:54 PM
ရခိုင်ပြည်နယ် လမူးတိုက်နယ်ရှိ ကျေးရွာများ ရေဘေးကြောင့် အကူအညီများ လိုအပ်နေ
သတင်း18/6/2018 01:12 PM
မနက်စောစောထ လမ်းလျောက်ခြင်းက ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ
ကျန်းမာရေး18/6/2018 12:03 PM
တစ်ပတ်အတွင်း အသားရေကောင်းလာစေမည့် နည်းလမ်းများ
လူမှုဘ၀18/6/2018 11:46 AM
BlackPink အဖွဲ့ရဲ့ “Duu-Du Duu-Du” သီချင်းထဲက လျှို့ဝှက်အဓိပ္ပာယ်များ
အနုပညာကဏ္ဍ18/6/2018 11:26 AM
Asian Fashion Influencerအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရတဲ့ Yaya Urassaya
အနုပညာကဏ္ဍ18/6/2018 10:57 AM
ဆောင်းဂျွန်ကီး ရုပ်ရုင်ဇာတ်လမ်းအသစ် ရိုက်ကူးတော့မည် ဟု ခန့်မှန်း
အနုပညာကဏ္ဍ18/6/2018 10:16 AM
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦးBurji Khalifaရဲ့ LED Screenတွင် ပြသခံရမည့် ပထမဆုံးကေပေ့ါစ်အဖွဲ့ EXO
အနုပညာကဏ္ဍ18/6/2018 10:06 AM
နိုင်ငံတကာ15/6/2018 05:48 PM
Mission:Impossible–Fallout ရုပ်ရှင်မှ ဇာတ်ဝင်ခန်းအတွက် အမြင့်၅မိုင်ရှိလေယာဉ်ပေါ်မှ လူစားမထိုးဘဲကိုယ်တိုင်အလွတ်ခုန်ချသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် Tom Cruise
အနုပညာကဏ္ဍ15/6/2018 05:35 PM